General Knowledge Archives - Page 23 of 80 - Lifestyle Myanmar
လူအနည်းစုသာလျှင် သိထားကြတဲ့ ပျားရည်ရဲ့ အံ့မခန်းအသုံးဝင်ပုံများ
ပျားရည်က အရသာရှိတဲ့ စားစရာတစ်ခုဆိုတာထက်ပိုပါတယ်။ သူ့ကို ရောဂါများကို ကာကွယ်ကုသတဲ့နေရာမှာလည်း အသုံးပြုနိုင်ပါသေးတယ်။ ရှေးတုန်းက အီဂျစ်ပြည်မှာဆိုရင် ပျားရည်ကိုဆေးဝါးတစ်ခုအဖြစ်အသုံးပြုကြတာပါ။ ဒါဆိုရင် ပျားရည်က ကျန်းမာရေးအတွက် ဘယ်လိုအသုံးဝင်လဲဆိုတာကို ဆက်ဖတ်ကြည့်ရအောင်နော်။ ၁။ ကိုယ်အလေးချိန် လျော့ချချင်သူများအတွက် အသုံးဝင်တယ် ပျားရည်က ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဇီဝကမ္မဖြစ်စဉ်ကိုတိုးမြှင့်ပေးတဲ့အတွက်ကြောင့် ကိုယ်အလေးချိန်ကျချင်သူများအတွက် မှီဝဲသင့်တဲ့စားစရာတစ်ခုပါပဲ။ လက်ဖက်စိမ်းကလည်း ဇီဝကမ္မဖြစ်စဉ်ကိုတိုးမြှင့်ပေးတဲ့အတွက်ကြောင့် ပျားရည်နဲ့လက်ဖက်စိမ်းကို တွဲသောက်ပေးမယ်ဆိုရင် ခန္ဓာကိုယ်အတွက် စွမ်းအင်နှစ်ဆတိုးမြှင့်ပေးပါတယ်။ ၂။...
Image credits: Liz Sexton သဘာဝတရားဟာ အနုပညာဖန်တီးသူတွေရဲ့ အကောင်းဆုံးသော လှုံ့ဆော်မှုတစ်ခုဘဲဖြစ်ပါတယ်။ ရာသီဥတုပြောင်းလဲလာမှုနဲ့ ဂေဟစနစ်ဆိုင်ရာပြသနာများကို မီးမောင်းထိုးပြချင်တဲ့အတွက်သဘာဝတရားနဲ့ဆိုင်တဲ့ အနုပညာအမျိုးအစားအသစ်တစ်ခုပေါ်ထွက်လာပါတယ်။ Minneapolis အခြေစိုက် အနုပညာရှင် Liz Sexton ဟာ လက်ရှိရင်ဆိုင်နေရတဲ့ တောရိုင်းတိရိစ္ဆာန်များ နေရပ်စွန့်ခွာတိမ်းရှောင်နေရမှုများကို လူအများသိရှိခံစားတတ်စေရန် ရည်ရွယ်ပြီး papier-mâché လို့ခေါ်တဲ့ လက်ရာမြောက်အနုပညာတစ်ရပ်ကို ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ Image credits: Liz Sexton သူမဟာ...
သင့်အနေနဲ့ မဖြစ်မနေခရီးသွားသင့်တဲ့အကြောင်းရင်း (၇)ချက်
၁။ ခရီးသွားခြင်းက စွန့်စားမှုတစ်ခု ခရီးသွားတယ်ဆိုတာ အကြီးမားဆုံးသော စွန့်စားခန်းကြီးတစ်ခု။ ဒါဟာ အကြီးမြတ်ဆုံးစမ်းသပ်မှုပဲ။ သင့်အနေနဲ့ တစ်ခါမှ မရောက်ဖူးတဲ့နေရာတွေကို သွားခြင်း၊ အကျွမ်းတ၀င်မဖြစ်သေးတဲ့မြို့တွေနှင့် လမ်းတွေရဲ့ အမည်ကိုကြားရခြင်းတွေက စိတ်၀င်စားမှုကို ဖြစ်စေပါတယ်။ သင်လမ်းမသိတဲ့အခါ ဘယ်နေရာကိုဘယ်လိုသွားရမယ်ဆိုတာ မြေပုံကိုစစ်ဆေးတာမျိုး၊ ကျပန်းလူတွေကို လမ်းမေးရတာမျိုးနှင့် ခရီးလမ်းပျောက်ဆုံးခြင်းတွေက ကြီးမားတဲ့စွန့်စားမှုတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ သင်စိတ်ဖိစီးမှုထက် သင့်ရဲ့စိတ်လှုပ်ရှားမှုက အမြဲရှိနေပါလိမ့်မယ်။ ဦးတည်ရာတွေက အပိုဆုတစ်ဆုပါပဲ။ ၂။...
သင်ဟာ အဆိပ်အတောက်လို လူတစ်ယောက် ဖြစ်နေကြောင်း သိနိုင်တဲ့ လက္ခဏာ (၅)ခု
ကိုယ့်အပေါ် တကယ်ကောင်းတာမျိုးမဟုတ်ဘဲ အပေါ်ယံကောင်းပြသူတွေဟာ အဆိပ်အတောက်လိုလူတစ်ယောက်ဖြစ်ကြောင်းနဲ့ ဒီလိုအပြုအမှုရှိတဲ့ လူတွေကို ဝေးဝေးက ရှောင်ရှားတာ အကောင်းဆုံးဖြစ်ကြောင်းကိုလည်း သိကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကိုယ်ကိုယ်တိုင်က အဆိပ်အတောက်လိုလူ ဟုတ်မဟုတ်ဆိုတာ မစဉ်းစားခဲ့မိကြပါဘူး။ ကိုယ်က ဒီလိုလူဖြစ်နေပြီလားဆိုတာာ တစ်မိနစ်လောက် အချိန်ယူပြီး စဉ်းစားဖို့ လိုပါတယ်။ ကိုယ်က အဆိပ်အတောက်ဖြစ်စေတဲ့ လူတစ်ယောက်ဖြစ်နေရင် ဘဝမှာ ပျော်ရွှင်မှုနှင့် လုံခြုံမှုတွေ မရှိတော့ဘဲ အငြင်းပွားဖွယ်ရာ ဆက်ဆံရေးမျိုးတွေ...
သက်တောင့်သက်သာ ဘဝမှာ နေထိုင်ရဖို့ ကူညီလိမ့်မယ့် ငွေရေးကြေးရေး စည်းမျဉ်း (၁၀)ခု
ဝင်ငွေ ဘယ်ကရနိုင်မလဲ? ပိုက်ဆံကို ဘယ်လိုရင်းနှီးမြုပ်နှံရမလဲဆိုတဲ့ ထိရောက်သော လှည့်ကွက်တွေ အများကြီးရှိပါတယ်။ သို့သော် ဒါတွေက များသောအားဖြင့် စီးပွားရေးလုပ်ဖို့ အရည်အချင်းရှိသူတွေအတွက်သာ ထိရောက်မှုရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သူဌေးဖြစ််ချင်သူ အပေါင်းတို့အတွက် အခွင့်အလမ်းမရှိဘူးလို့ မဆိုလိုပါဘူး။ အခြားလှည့်ကွက်တွေနဲ့ ချဉ်းကပ်မှုအကြောင်းကို လေ့လာသင်ယူဖို့သာ လိုအပ်ပါတယ်။ ၁။ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ရင်းနှီးမြှုပ်နှံပါ သင့်အနာဂတ်အတွက် အကောင်းဆုံး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုက သင့်ကိုယ်သင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံတာ...
စိတ်ညစ် စိတ်အားငယ်တာတွေကို ၅ မိနစ်အတွင်း မောင်းထုတ်နိုင်မယ့်နည်းလမ်း ၅ခု
ဘာအကြောင်းမှန်းမသိပဲ နေရထိုင်ရတာမကောင်းဘူးလား? စိတ်ထဲထိုင်းမှိုင်းလေးလံနေလား? တခုခုကြောင့်ခေါင်းခဲနေရလား?ဘယ်လိုအကြောင်းကြောင့်ပဲဖြစ်ဖြစ် မကောင်းတဲ့စိတ်တွေ အပျက်သဘောဆောင်တဲ့ အတွေးတွေကို မောင်းထုတ် ပစ်ဖို့လိုပါတယ်။ အဲ့ဒီလို စိတ်အပျက်အဆွေးတွေကို ၅မိနစ်အတွင်း မောင်းထုတ်နိုင်မယ့်နည်းလမ်းတွေကို မျှ၀ေပေးချင်ပါတယ်။ကဲ..အောက်မှာဖတ်ကြည့်လိုက်ပါဦး နှိပ်ပါ နှိပ်နယ်ခြင်းက စိတ်ဓါတ်ကျနေတာတွေ မကောင်းတဲ့အတွေးတွေ ထိုင်းမှိုင်းလေးလံနေတာတွေကို ၅မိနစ်မပြည့်ခင်မှာတင်ပျောက်သွားစေနိုင်ပါတယ်။ အပျက်သဘောအတွေးတွေကို နှိပ်နယ်ခြင်းက မောင်းထုတ်နိုင်ပါတယ်။ ဝမ်းနည်းတာတွေ၊ ဒေါသထွက်တာတွေ စိုးရိမ်တာတွေကိုဖယ်ရှားဖို့ ခန္ဓာကိုယ်ကို နှိပ်နယ်ပေးပါ။ ဒါမှမဟုတ် ခေါင်းလျော်ရင်း...
ကော်ဖီသောက်တဲ့လူတွေက ဘာကြောင့် ပိုတော်၊ ပိုဥာဏ်ကောင်းပြီး ပိုအောင်မြင်တတ်ကြတာလဲ
နေ့တစ်နေ့ကို တခြားသူတွေက အိပ်ချင်မူးတူးနဲ့စတင်ပေမယ့် ကော်ဖီကြိုက်နှစ်သက်သူတွေကတော့ ကော်ဖီတစ်ခွက်သောက်လိုက်တာနဲ့ အိပ်ချင်မူးတူးဖြစ်နေတာတွေ ပျောက်ပြီး လန်းဆန်းသွားကြပါတယ်။ မနက်ခင်းကို အရသာ ကောင်းမွန်တဲ့ ကော်ဖီလေးနဲ့စတင်လိုက်ရင် ပြီးပြည့်စုံတဲ့ နေ့တစ်နေ့ကို ရရှိမှာပါ။ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရ ပိုပြီး တက်ကြွ ကဖိန်းဓာတ်က သွေးကြောထဲကို ဝင်ရောက်လာတဲ့အခါမှာ ဓာတ်ဆီလိုပဲ ခန္ဓာကိုယ်ကို ပိုပြီး တက်ကြွလန်းဆန်းစေပါတယ်။ ဒါကြောင့် gym မဆော့ခင်ဒါမှမဟုတ် အားကစားမလုပ်ခင် ၁...
ဖေဖော်၀ါရီလဆိုတာ စာကြည့်တိုက်ချစ်သူတွေရဲ့ လလေးတစ်လဖြစ်ပါတယ်။ စာရေးသူ ဒါမှမဟုတ် အချိန်ကာလအရဖွဲ့စည်းထားတဲ့ အသိပညာ၊ မရေမတွက်နိုင်တဲ့ရောင်စုံချည်နှောင်ထားတဲ့ကြိုးလေးတွေနှင့် ပြည့်နေတဲ့ အဆောက်အအုံတွေကို နှစ်သက်တယ်ဆိုရင် ဖေဖော်၀ါရီလဟာ ၀မ်းသာရမယ့်လတစ်လပါပဲ။ သင့်အနေနဲ့ ဖတ်ဖို့အတွက် ၀တ္ထုအသစ်ရှာနေတာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ စီမံကိန်းတစ်ခုအတွက်သုတေသနပြုလုပ်နေတာပဲဖြစ်ဖြစ် သင့်ပတ်၀န်းကျင်မှာရှိတဲ့ နွေးထွေးတဲ့ကမ္ဘာလေးလိုချင်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ် ဒါတွေအားလုံးကို ဖန်တီးပေးနိုင်မယ့် နေရာလေးတစ်ခုရှိပါတယ်။ အဲဒါကတော့ စာကြည့်တိုက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ စာကြည့်တိုက်တွေက လှပတဲ့ဗိသုကာတွေနှင့် သမိုင်းနှစ်သက်တဲ့သူတွေအတွက် နေရာတွေလည်းရှိပါတယ်။ ဒီကနေ့မှာတော့ ကမ္ဘာကြီးပေါ်က...
ဗီတာမင်-ဒီ အရိုးတွေကို သန်မာစေတဲ့ ဗီတာမင်-ဒီ ကို နေရာင်ခြည်က ရပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း ကမ္ဘာ့နိုင်ငံတချို့မှာတော့ နေရောင်ခြည်ကို လုံလောက်စွာမရရှိတဲ့အပြင် ဗီတာမင်-ဒီ ကို အစာအဟာရထဲကရရှိရန် ခဲယဉ်းတာမို့ ဖြည့်စွတ်ဆေးအဖြစ်သောက်တာက အသင့်တော်ဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ Omega3(ငါးကြီးဆီ) Omega3သည် ငါးမစားသောသူများအတွက် အကောင်းဆုံးဖြည့်စွတ်စာဖြစ်သည်။ Omega3သည် သွေးပေါင်ချိန်ကို ကျဆင်းစေပြီး...
ခြင်တွေဟာ လူအချို့ကို တခြားလူတွေထက် ဘာကြောင့်ပိုကိုက်ရတာလဲ
ဘ၀ကြီးက မတရားဘူး။ ကမ်းခြေတွေကိုသွားတဲ့အခါ (သို့) အခြားပြင်ပလှုပ်ရှားမှုတွေမှာ သင့်ကိုခြင်တွေက ၀ိုင်းအုံကိုက်နေတဲ့အချိန်မှာ တစ်ခြားလူတွေကို ထိတောင်မထိရသေးဘူး။ အဲ့လိုကြုံဖူးလား။ သူတို့မှာ အထူးကာကွယ်ထားတာမျိုးလည်း မရှိဘူးဆိုရင်ရော။ တကယ်တော့ အကြောင်းပြချက်က ရိုးရိုးလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ လေ့လာကြရအောင်။ ၁။ ပိုပြင်းပြင်းထန်ထန်အသက်ရှုခြင်း ဒီအင်းဆက်တွေဟာ ကျွန်တော်တို့အသက်ရှုတဲ့အခါ ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုဒ်ဓာတ်ကို ဆွဲဆောင်တယ်။ ကျွန်တော်တို့အသက်ပြင်းပြင်းရှုလေလေ ခြင်တွေကကျွန်တော်တို့ဆီကို လာနိုင်ခြေပိုများလေဖြစ်ပါတယ်။ ၎င်းက အသက်ရှုလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာ ပြဿနာတွေ (သို့)နုလုံးရောဂါတွေကြောင့်ဖြစ်စေ...
Page 23 of 80 Prev 1 … 22 23 24 … 80 Next